Ahụike: mmetụta uche nke porn | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Health Mmetụta Echiche nke Porn
Ọrịa a na-arịa Covid-19 pụtara na ndị mmadụ n'ụwa niile na-ata ahụhụ karịa mgbanwee n'ihi mgbanwe na ejighị n'aka na nje a na-ebute ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọtụtụ na-echigharị ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ iji belata nkụda mmụọ ma ọ bụ nkụda mmụọ, ma ọ bụ naanị iji nweta ọ pleasureụ dị ngwa. Multilọ ọrụ porn ọtụtụ ijeri dollar na-erite uru nke ọtụtụ ndị na-agwụ ike mgbe ha nọ n'ụlọ ma na-enye ohere ịnweta saịtị kachasị iji gbaa ume iji. Ihe ịma aka dị na ya bụ na ndozi ngwa ngwa na-enwekarị ihe egwu zoro ezo, dịka ịdabere na nwayọ nwayọ nke nwere ike ịkpata nsogbu na nsogbu na ụfọdụ riri ahụ. Peeji ndị na-esonụ ga-enyere gị aka ịmatakwu ihe egwu na ihe ị nwere ike ime iji jiri usoro kachasị mma n'oge a. Ihe ikpeazu ichoro bu mgbakasi ahuhu na ahuhu nke I ghari izere
Nke a bụ uru abụọ bara uru ị ga-atụle mgbe ị na-atụgharị uche na mmetụta porn na ahụike ọgụgụ isi:
"N'ime ihe niile ị na-eme na ịntanetị, porn nwere ike ịmalite ịtiveụ ahụ," ka ndị ọkà mmụta banyere akwara ozi bụ́ Dutch na-ekwu Meerkerk et al. 2006
Ndụ gị na-agbanwe mgbe ị nwere ihe ọmụma ụbụrụ gị nke na-arụ ọrụ. Ọ na-ewepụ obi amamikpe mgbe ị matara na e nwere ihe ndabere sitere n'okike sitere n'okwu ndị metụtara mmetụta uche ụfọdụ, ”ka dibịa na-agwọ ọrịa uche bụ́ Dr. John Ratey na-ekwu, (P6 Okwu Mmalite n’akwụkwọ“ Spark! ”).
Tupu anyị abanyekwuo nkọwa gbasara mmetụta uche nke iji egwu egwu na-agafe oge, ka anyị cheta ihe mere o ji dị mkpa ịma ya aka. Porn Intanet na-egbochi ọchịchọ na afọ ojuju na ndụ dị adị, mmekọrịta mmekọahụ. Nke ahụ bụ ihe nwute dị ka ịhụnanya mmekọahụ na mmekọrịta chiri anya bụ ụfọdụ n'ime ahụmịhe kachasị mma anyị nwere ike inwe dị ka mmadụ.
Learningmụta banyere Mmetụta Porn
Mmụta a banyere mmetụta porn na ụbụrụ bụ otu ihe kachasị mkpa na-enyere ndị mmadụ aka imeri ọtụtụ echiche na-adịghị mma na nke anụ ahụ site na ị ofụbiga mmanya ókè. Ruo ugbu a, enwere Nyocha 85 nke ahụ jikọtara ahụike na uche na-adịghị mma na iji egwu egwu. Mmetụta ndị a sitere na ụbụrụ ụfụ na nchekasị nke ọha mmadụ ruo na ịda mbà n'obi, ọdịdị ahụ na-adịghị mma na nlọghachi azụ. Nsogbu iri nri, na-arịwanye elu nke ndị na-eto eto, na-akpata ọnwụ karịa ọrịa ọgụgụ isi ọ bụla. Porn nwere mmetụta dị ukwuu na echiche dị mma nke ọdịdị ahụ.
Ọbụna awa atọ nke porn na-eji otu izu nwere ike ibute ngosi mbelata nke isi awọ na mpaghara ụbụrụ ụbụrụ. Mgbe njikọ ụbụrụ metụtara, ọ pụtara na ha na-emetụta omume na ọnọdụ. Bgbachichi anya na ịkpa ike ịntanetị nwere ike ime ka ụfọdụ ndị ọrụ nwee nsogbu ahụike ọgụgụ isi, iji ike eme ihe, ọbụnadị ị addictionụ ọgwụ ọjọọ. Ihe ndị a na-emetụta ndụ ndụ na ebumnuche ndụ. Ndị ọrụ na-ekwukarị banyere 'ịnwụ' maka ihe ụtọ kwa ụbọchị.
Lee vidiyo nkeji 5 a ebe a neurosurgeon kọwara ụbụrụ mgbanwe. Nke a bụ njikọ ka isi nnyocha na ọmụmụ na ogbenye na uche ike na mmetụta uche, na ogbenye cognitive (echiche) pụta. Ihe ndị a na-emetụta ikike onye ọrụ iji nweta nke ọma na ụlọ akwụkwọ, kọleji ma ọ bụ ọrụ. Hụ anyị n'efu Atụmatụ atụmatụ maka ụlọ akwụkwọ iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịmara mmetụta ahụike nke ọgụgụ isi nke porn na ahụike ha na ike ha nweta na ụlọ akwụkwọ.
Ọ bụ ezie na ịingụbiga mmanya ókè na oge na-aga nwere ike, n'onwe ya, na-ebute nsogbu ahụike ọgụgụ isi, ụfọdụ ndị tara ahụhụ na ndụ ha ma jiri porn na-eme onwe ha obi jụrụ. N'okwu ndị a, ndị mmadụ chọrọ enyemaka iji laghachite na ahụ ha iji nyere ha aka ijikwa ihe omume (s) na-eme ka ha ghara ịdaba na usoro nnabata na-ekwesịghị ekwesị. Anyị ga-akwado akwụkwọ a site n'aka onye dibịa na dibia mmụta sayensị bụ Bessel van der Kolk, “Ahụ Na-edebe Akara”Nke dabeere na USA. E nwere ezigbo vidiyo na ya na YouTube na-ekwu maka ụdị trauma dị iche iche na ụbụrụ dị iche iche (ụbụrụ limbic) ọgwụgwọ ndị dị irè. Na nke a ọ na-atụ aro ike nke yoga dị ka otu ọgwụgwọ dị otú ahụ. N’ime nke a dị mkpirikpi ọ na-ekwu maka ya owu na-ama na post nsogbu traumatic nchegbu. Ebe ọ na-ekwu okwu banyere trauma na mgbakwunye. Nke a metụtara trauma ọtụtụ mmadụ na-enwe n'ihi ya ọrịa, COVID19. Ndụmọdụ amamihe dị na ya.
Ndepụta dị n'okpuru na-akọwapụta mmetụta dị iche iche nke ndị ọrụ ahụike gosipụtara yana site na iweghachite ndị ọrụ na weebụsaịtị mgbake dị ka NoFap na RebootNation. Achọpụtaghị ọtụtụ ọrịa ruo mgbe onye ọrụ kwụsịrị izu ole na ole.
Isi nke Porn risks
Omume ihe na-akpali agụụ mmekọahụ nwere ike ibute nsogbu ndị a:
na-apụ na ọrụ mmekọrịta
ịzụlite ndụ nzuzo
ịgha ụgha na iduhie ndị ọzọ
na-eche banyere onwe ya
ịhọrọ porn karịa ndị mmadụ
iwe iwe na nkụda mmụọ
na-enwe ọnọdụ mgbanwe
obi ojoo na egwu
enwe mmetụta nke enweghị ike n'ihe metụtara porn
Mmekọahụ na-ekwenye ndị ọzọ
ile ndi mmadu anya dika ihe ndi mmadu
ikpe ndi mmadu ikpe bu isi ihe diri aru ha
na-akwanyere mkpa ndi ozo choro maka nzuzo na nchedo
ịbụ onye na-adịghị echebara akparamagwa na-emebi ihe metụtara mmekọahụ
Itinye aka n'ihe dị egwu ma dịkwa ize ndụ
na-abanye porn n’ebe ọrụ ma ọ bụ n’ụlọ akwụkwọ
na-enweta ihe osise ụmụaka
isonye na mmechuihu, mkparị, ime ihe ike, ma ọ bụ mmeko nwoke na nwanyị
na-amịpụta, na-ekesa ma ọ bụ na-ere porn
itinye aka na inwe ahụghị ahụ ike na mmekọahụ na-emerụ ahụ
Onye gị na ya na-akpachi anya nke ọma
Emebi emebi mmekọrịta na-emebi mmekọrịta na aghụghọ banyere iji porn
onye na-ele onye na-ele porn anya dika onye na-akwadoghi ihunanya dika “aghụghọ”
onye ya na ya na-akpasu iwe na iwe
mmekọrịta na-emebi n'ihi enweghị ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù
onye ya na ya so na-eche maka ọdịmma ụmụaka
onye nwere mmekọ nwoke na nwanyị na-enwe mmetụta nke inwe mmekọahụ na ezughị ezu ma egwu nke porn
ọnwụ nke mmetụta uche na inwe mmekọrịta nwoke na nwanyị
enwekwaghị mmasị na nwoke ma ọ bụ nwanyị
ihe isi ike ịbụ ihe kpalitere na / ma ọ bụ imepụta orgasm na-enweghị porn
echiche na-akpali agụụ mmekọahụ, echiche efu, na ihe osise nke porn n'oge mmekọahụ
ibu nmekorita nwoke na nwanyi na inwe nmeko
na-enwe nsogbu ijikọ ịhụnanya na nlekọta na mmekọrịta nwoke na nwanyị
inwe mmetụta nke mmekọahụ site na nchịkwa na mmanye
ịba ụba mmasị n'ihe ize ndụ, mmechuihu, mkparị, na / ma ọ bụ mmekọahụ na-ezighi ezi
Mmekọahụ na-abawanye na mmekọahụ
dysfunctions nwoke na nwanyị - enweghi ike ịmụba, agụụ ejikọtara, arụrụala
Lojọ onwe onye
mmetụta nke ịbụ onye a gbapụrụ na ụkpụrụ mmadụ, nkwenkwe ya na ebumnuche ya
mfu nke iguzosi ike n’ezi ihe
mebiri onwe onye
obi ịta ụta na ihere
mmetụta nke porn na-achịkwa
Ileghara akụkụ dị mkpa nke ndụ anya
ahụike onwe gị (ụkọ ụra, ike ọgwụgwụ, na nlekọta onwe onye na-adịghị mma)
ndụ ezinụlọ (nleghara anya ndị ibe, ụmụaka, anụ ụlọ na ọrụ ụlọ)
ọrụ na nchụso ụlọ akwụkwọ (belata mgbado anya, nrụpụta, na ọganihu)
ego (imefu na porn na-akarị akụrụngwa)
ime mmụọ (nkewapụrụ okwukwe na omume ime mmụọ)
Ise igbo riri Porn
na-enwe agụụ mmekọahụ na-agụsi agụụ ike
ihe isi ike ijikwa echiche, ma obu ikpughe ya, na iji ihe ojoo
enweghị ike ịkwụsị iji porn mee ihe ọ bụla n'agbanyeghị nsonaazụ na-adịghị mma
ugboro ugboro ọdịda na-akwụsị iji porn
achọrọ ihe dị oke egwu ma ọ bụ mkpughe kpụ ọkụ n'ọnụ iji porn iji nweta otu mmetụta (akara ngosi ebe obibi)
inwe ahụ erughị ala na mgbakasị ahụ mgbe a napụrụ ya porn (wepu akara ngosi)
Edere ndepụta ndị dị n'elu n'akwụkwọ a “The Porn Trap"Nke Wendy Malz kwuru. Lee n'okpuru maka nkwado nyocha.
"Okpomọkụ nke oge" na Mmekọahụ Mmekọahụ
Na nchọpụta a na-adọrọ mmasị “Okpomọkụ nke oge: Mmetụta nke Mkpali Mmekọahụ na Mkpebi Mkpebi“, Nsonaazụ na-egosi na“ ọmarịcha ihe omume na-egosi na agụụ mmekọahụ na-akpali ya dị ka njiko nke ụdị ”na ụmụ okorobịa…
“Ihe nke abụọ anyị chọpụtara bụ na o yikarịrị ka ndị mmadụ hà amachaghị nnọọ ihe mkpali agụụ mmekọahụ na-emetụta mkpebi ha na omume ha. Dị ekele dị otua nwere ike ịdị mkpa maka ịme mkpebi nke mmadụ na nke obodo.
“… Ụzọ kachasị dị njide onwe onye nwere ike isi bụrụ na ọ bụghị site n'ike aka (nke egosiri na ọ dị obere ịrụ ọrụ), kama na-ezere ọnọdụ ndị mmadụ ga-akpalite ma nwekwaa njide. Ọdịda ọ bụla enweghị ike ịghọta mmetụta agụụ mmekọahụ na-emetụta omume mmadụ nwere ike iduga n'omume na-ezighi ezi iji zere ọnọdụ ndị dị otú ahụ. N’otu aka ahụ, ọ bụrụ na ndị mmadụ ejichaghị ike ha inwe mmekọahụ, ha nwere ike ha agaghị akpachapụ anya iji gbochie mbibi nke ụdị nsogbu ahụ ga-akpatara ha. Dị ka ihe atụ, nwatakịrị na-anabata '' sị mba, '' dịka ọmụmaatụ, nwere ike iche na ọ dịghị mkpa iweta condom na ụbọchị, si otú a na-amụba ohere nke ịtụrụ ime ma ọ bụ ịnyefe ọrịa STD ma ọ bụrụ na ọ ga - ejide onwe ya na okpomọkụ nke oge a. ”
“Otu echiche ahụ metụtakwara mmadụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ kpee omume ndị ọzọ nwere ike ịdabere na ịlele ha mgbe agụụ mmekọahụ adịghị akpali ha, ma ghara ịghọta mmetụta nke agụụ mmekọahụ, mgbe ahụ ọ ga-abụ na omume onye nke ọzọ ga-ejide ha mgbe a kpaliri ha. Suchdị omume a nwere ike iso kpata ndaba n'ike. N'ezie, ọ nwere ike ịmepụta ọnọdụ rụrụ arụ nke ọ ga-abụrịrị na ndị kachasị nwee mmasị na ụbọchị ha ga-enwe mmeko nwoke na nwanyị n'ihi na ha emeghị ihe ọ bụla, ha anaghị aghọta ma ọ bụ buru amụma banyere omume onye ọzọ (kpaliri). "
Na nchịkọta, nnyocha e mere ugbu a na-egosi na agụụ mmekọahụ na-abara ndị mmadụ uru n'ụzọ dị ukwuu. Nke a ekwesịghị iju anyị anya na ọtụtụ ndị nwere ahụmịhe nke agụụ mmekọahụ, mana ịdị ukwuu nke nsonaazụ ahụ bụ ihe ịtụnanya. Nsonaazụ bara uru, nsonaazụ anyị na-egosi na mbọ iji kwalite mmekọrịta nwoke na nwanyị na-enweghị nchekwube, nke kwesịrị ekwesị ga-elekwasị anya n'ịkwadebe ndị mmadụ ịnagide '' okpomọkụ nke oge a '' ma ọ bụ iji zere ya mgbe ọ ga-eduga n'omume na-ebibi onwe onye. Mgbalị ndị a na-eme banyere njide onwe onye nke na-agụnye isi ike (Baumeister & Vohs, 2003) nwere ike ghara ịdị irè n'agbanyeghị mgbanwe dị omimi nke mmụpụta na mkpali nke mkpali na-akpata. ”
Lee okwu TEDx nke Dan Ariely dere na Njide Onwe Onye.
Ictionụ ọgwụ ọjọọ - mmetụta na ụra, ọrụ, mmekọrịta
Mmetụta kachasị dị na ikiri porn ịntanetị ma ọ bụ ọbụna egwuregwu bụ otú o si emetụta ụra. Ndị mmadụ na - ejikọ 'ike na ike gwụrụ' na enweghị ike itinye uche na ọrụ na-esote ụbọchị. Inggachi nkịtị na ịchọrọ ụgwọ ọrụ dopamine ahụ, nwere ike iduga n'omume miri emi nke siri ike ịgba. O nwekwara ike ibute mmụta ‘pathological’ n’ụdị nke iri mmadụ ahụ. Nke ahụ bụ mgbe onye ọrụ na-aga n'ihu na-achọ ihe ma ọ bụ ọrụ n'agbanyeghị nsonaazụ na-adịghị mma - dị ka nsogbu na-arụ ọrụ, ụlọ, na mmekọrịta wdg. Nke a na-eme ka ha laghachi na ya ugboro ugboro iji nwaa iweghachi mmụọ nke agụụ. Ụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịmalite mgbe ị na-agbalị ịnagide ya nchekasị, mana ọ na - emekwa ka onye ọrụ ghara ịda mba. Ọ bụ okirikiri ọjọọ.
Mgbe usoro ọmụmụ nke ihe na - adịghị mma, ụbụrụ nwere ọgụgụ isi na - anwa ịkọwa ihe na - eme dabere na ahụmịhe gara aga. Dopamine dị ala na mbelata nke neurochemicals ndị ọzọ metụtara nwere ike ime ka mmadụ nwee obi ụtọ. Ha gụnyere ike ọgwụgwụ, agụụ, nrụgide, ike ọgwụgwụ, ike dị ala, iwe, agụụ, nkụda mmụọ, owu ọmụma na nchekasị. Otu anyị si ‘akọwa’ mmetụta anyị na ihe kpatara nsogbu ahụ, na-emetụta akparamagwa anyị. Ọ bụghị ruo mgbe ndị mmadụ kwụsịrị ile ndị gba ọtọ ka ha na-achọpụta na omume ha abụwo ihe na-akpata ọtụtụ mgbagha na ndụ ha.
Nyocha onwe onye
Anyị na-achọkarị iji ọgwụ ma ọ bụ omume anyị kachasị amasị onwe anyị iji ọgwụ ọjọọ. Anyị na-eme nke a n’amaghị na ọ nwere ike ịindụbiga ihe ọ inụ inụ n'omume ahụ ma ọ bụ ihe ahụ mere ka obi ghara ịdị gị njọ. Nsonaazụ nke mmanya bụ nkwụghachi neurochemical. Na Scotland, ndị a alcoholụrụma na-a fromụ ihe ọ sufferingụ fromụ n'echi ya na-ejikarị okwu a ma ama. Ha na-ekwu maka iwere “ntutu nkịta nke na-ata gị ụta”. Nke ahụ pụtara na ha nwere mmanya ọzọ. Ọ bụ ihe nwute na ụfọdụ ndị, nke a nwere ike ibute ajọ usoro bingeing, ịda mba, bingeing, ịda mba na ndị ọzọ.
Mmetụta nke ikiri oke, porn na-akpali akpali nke ukwuu nwere ike ibute mgbaaka na mgbaàmà oke. O nwere ike isi ike ịhụ otu ịingụ porn na iri ọgwụ nwere ike isi nwee otu mmetụta n'ozuzu ụbụrụ, mana ọ nwere. Brainbụrụ na-eme ihe na-akpali akpali, kemịkalụ ma ọ bụ ihe ọzọ. Nsonaazụ anaghị akwụsị na mmanya. Ovenọgide na-echekarị maka ihe a nwere ike ime ka mgbanwe ụbụrụ pụta na nsonaazụ nke nwere ike ịgụnye ihe ndị a:
Nchọpụta emere gosiri na iri ihe ndị gba ọtọ na-eso a enweghị nkwado nke onye ọlụlụ onye ọlụlụ. Usedmara ihe ọhụụ na agụụ na-arịwanye elu nke agụụ mmekọahụ na-enye site na porn na iche na enwere ike ịnwe onye 'na-ekpo ọkụ' na vidiyo na-esote, pụtara na ndị isi ndụ ha anaghị akpalite ụbụrụ ha. Ọ nwere ike ịkwụsị ndị mmadụ chọrọ itinye ego na ịmalite mmekọrịta dị adị n'ezie. Nke a na-eweta nhụsianya maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla: ụmụ nwoke n'ihi na ha anaghị erite uru site na mmetụta ịhụnanya na mmekọrịta mmekọrịta dị adị na-eweta; na ụmụ nwanyị, n'ihi na enweghị mmụba nke ịchọ mma nwere ike ime ka nwoke nwee mmasị bụ onye ụbụrụ ya na-achọ mkpa ọhụụ na ihe na-ekwekọghị n'okike nke mkpali. Ọ bụ enweghị mmeri ọnọdụ.
Ndị na-agwọ ọrịa na-ahụkwa mmụba dị ukwuu na ndị mmadụ na-achọ enyemaka maka ihe riri ahụ na ngwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Nkwa nke adịgboroja nke ihe dị mma mgbe niile na pịa ma ọ bụ swipe na-esote, na-akwụsị ndị mmadụ ilekwasị anya n'ịmata naanị otu onye.
Ọrụ Ndị Ọrụ
Na nyocha nke ụmụ nwoke mahadum, nsogbu na-arụ ọrụ mmekọrịta mụbara dị ka ihe na-akpali agụụ mmekọahụ. Nke a na-emetụta nsogbu ndị nwere uche nke uche dị ka ịda mbà n'obi, nchegbu, nrụgide ma belata ọrụ mmekọrịta.
• Nnyocha nke ndị Korea gụrụ akwụkwọ na 20s ha chọtara mmasị maka iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ mee ihe iji nweta ma nwee agụụ mmekọahụ. Ha choputara na o di uto karia inwe mmekorita nwoke na nwanyi.
E gosiputara iri ihe ndi gba ọtọ eme ka mmadu ghara inwe ike ime ngwa ngwa ka o nwekwuo ugwo. N’aka ozo, ikiri ihe nlere porn na eme ka ị ghara inwe ezi uche ma ghara inwe ike ime mkpebi ndi doro anya na mmasi gi dika ime oru gi n’ime ulo na imuta ihe mbu karia igha gi obi uto. Ibute ụgwọ ọrụ ahụ tupu mbọ gị.
• N'enyocha umuaka ụmụ nwoke 14 afọ, ihe dị elu nke ịntanetị na-eme ka a ihe ize ndụ nke ịrụ ọrụ omuma, na ihe ndị a na-ahụ anya ọnwa isii mgbe e mesịrị.
Ka porn nwoke na-ekiri…
Ọ bụrụ na nwoke na-ekiri ndị gba ọtọ, o yikarịrị ka ọ ga-eji ya na-enwe mmekọahụ. Ọ nwere ike inye ya ọchịchọ ime ihe porn scripts ya na onye òtù ọlụlụ ya, kpachaara anya na-ele ihe ngosi nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'oge mmekọahụ iji nọgide na-enwe obi ụtọ. Nke a na-ebute nchegbu gbasara arụmọrụ ya na ọdịdị ahụ ya. Ọzọkwa, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ dị elu na-ejikọta ya na inwe mmekọ nwoke na nwanyị inwe mmekọahụ.
N’otu nnyocha, ụmụ akwụkwọ na ngwụsị nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị kọọrọ njikọ siri ike n’agbata ogo ihe oriri na-akpali agụụ mmekọahụ na agụụ mmekọahụ dị ala. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị na-ere ahịa n'oge a na-akọ akụkọ mmeghachi omume na-adịghị mma.
• Ọmụmụ ihe 2008 nke Mmekọahụ na France chọpụtara na 20% nke ụmụ nwoke 18-24 "enweghị mmasị na mmekọahụ ma ọ bụ mmekọahụ". Nke a bụ nnọọ ihe megidere stereotype mba French.
• Na Japan na 2010: ọchịchị gọọmentị nnyocha e mere chọpụtara na 36% ụmụ nwoke ndị nọ na 16-19 "enweghị mmasị na mmekọahụ ma ọ bụ nwee mgbagha na ya". Ha na-ahọrọ dolls ma ọ bụ anime.
Morphing agụụ mmekọahụ…
N'ebe ụfọdụ, enwere ike ịtụ anya ya mmekọahụ agụụ mmekọahụ na-agbanweghachi mgbe ha kwụsịrị iji porn. Lee ihe a bụ ogologo ndị mmadụ na-ele nwoke nwere mmasị nwoke porn, gays na-ele ogologo porn na ọtụtụ ọdịiche. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-etolite agụụ mmekọahụ na mmasị n'ihe metụtara mmekọahụ na-abụghị isi mmekọahụ ha bu pụta ụwa. Ọ baghị uru ihe nghazi anyị ma ọ bụ njirimara mmekọahụ, ị pornographyụ ihe ọ ofụ internetụ na-adịghị ala ala nke ịntanetị nwere ike ime ka nnukwu mgbanwe gbanwee na ụbụrụ. Ọ na-agbanwe ma ụbụrụ arụ ọrụ yana ọrụ. Dịka onye ọ bụla bụ ihe pụrụ iche, ọ dịghị mfe ikwu etu porn si ezuru maka naanị obi ụtọ tupu ịmalite ime mgbanwe. Inggbanwe ihe ụtọ gbasara agụụ mmekọahụ bụ ihe egosi na mgbanwe ụbụrụ na-agbanwe. Brainbụrụ mmadụ niile ga-eme ihe dị iche.
Lelee akụkụ anyị na Na-agbagharị Porn maka otutu enyemaka na aro.
<< Iguzozi & ahaghị nhata Mmetụta Ahụ >>